Ukwazi Lapho-ke Lokho Akwaziyo Manje, #MyHodgesStory »Hodges U
Iziphakamiso - Oklebe Besikhathi Esizayo
Imininingwane Yezezimali Zabafundi
Ukufundiswa kanye Nemali
Ukwehlukahluka ku-Ed Ephakeme
Ukuqondiswa kwabafundi okusha
Ikhathalogi Yesifundo Yamanje
Imigomo nemibandela yokubhalisa
Amafomethi Wokulethwa Kwamadigri
Funda Ngezisebenzi Zethu
Ukwazi Manje Lokho Akwaziyo Manje
Ukwazi Lapho-ke Lokho Akwaziyo Manje - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul
Kudala ngaphambi kokuba uMartha “Dotty” Faul abhalise eHodges University, wachitha cishe iminyaka engama-20 akha umsebenzi wokuqinisa umthetho eHhovisi likaDeSoto County Sheriff naseHhovisi likaSheriff's Sheriff's Office.
Kusukela ekusebenzeni komgwaqo njengephini likasherifu ekuphatheni uphenyo lobugebengu njengomseshi, uFaul ukubonile futhi wakubona lokho abaningi abangakucabanga nje. Ehleli ohlangothini lomthetho oluthinteka kakhulu kumaqiniso amabi futhi anzima esintu, uFaul uthathe umhlalaphansi ngo-Agasti 2009 wavula elakhe ibhizinisi, IJustice Investigations Services, Inc.., ngo-2010 njengendlela yokumnikeza usizo kulabo abaswele.
Ngenkathi esezigabeni zokuqala ukuvula ibhizinisi lakhe, wabona ukubaluleka kwezinga elinganikezwa ekwakheni inkampani yakhe. Ngenkathi besebenza eHhovisi likaCharlotte County Sheriff, abamele baseHodges University (ngaleso sikhathi ababaziwa ngokuthi yi-International College) bavakashela ukuzoxoxa ngeminikelo yezifundo.
“Ngiyazisola ngokungabamukeli ngesikhathi sabo,” ehleka. "Kodwa lapho kufika isikhathi sokubuyela esikoleni, ngakhumbula uHodges, ngakho ngabhalisa esikoleni sebhizinisi ngo-2009."
Ngemuva kokuchitha izinyanga eziyisithupha ohlelweni lwebhizinisi futhi esebenza ekuthengiseni ogwini olusempumalanga yeFlorida, uFaul wabona ukuthi amathalente akhe ayekulungele kangcono ubulungiswa bezobugebengu, hhayi ibhizinisi, ngakho-ke washintsha izinhlelo zamazinga, ethatha zonke izifundo zakhe online.
Njengomfundi oku-inthanethi, uyavuma, “Nginomuzwa wokuthi ngathola ukunakwa okwengeziwe ngoba amabhodi ezingxoxo anginikeza ithuba lokukhuluma, futhi abafundisi babetholakala kalula. Kwakungafanele ngikhathazeke ngokuthi isikhathi sizophela ekupheleni kwesifundo futhi ngigijimele phambili ngiyobuza lo profesa umbuzo. ”
Ukuletha isipiliyoni sakhe seminyaka kwezomthetho ohlelweni lwakhe lweziqu, uFaul wabona ukuthi kungakanani umsebenzi wakhe wobungcweti owawugxile endaweni eyodwa kuphela, nokuthi izifundo zanikeza kanjani ukuqonda okubalulekile enkundleni enkulu yezobulungiswa.
“Lezi zifundo zingifundise ngokuphathwa, ukulungiswa kanye nobulungiswa bezingane. Ngifunde okuningi ngomlando wobulungiswa bobugebengu nokuthi amasiko ehlukene abubheka kanjani ubulungiswa, ”kusho yena.
Ukuzuza kuye Isiqu seBachelor kuCriminal Justice ngo-2012, wagxila emizameni yakhe yokwakha ibhizinisi lakhe. Yena nethimba lakhe labaphenyi abangama-20 basebenzisana nezwe laseFlorida ukusiza abantu abahlwempu ohlelweni lwezobulungiswa bezobugebengu abangakwazi ukuzivikela ngokomthetho. Ngokusebenzisana nabameli, uFaul nethimba lakhe basebenzisa ubuchwepheshe babo ukusiza ekuqoqeni amaqiniso, ubufakazi kanye nolwazi ukwakha icala elisebenzayo.
Ngenkathi amacala esukela enkohlakalweni kuya ekubulaweni kuya kubantu abalahlekile, uFaul usebenzisa ubuchwepheshe bakhe ekutholeni amanga nasekukhwabaniseni ukusiza ekuphenyweni; kodwa-ke, ngenxa yesimo sebhizinisi lakhe kanye nezixhumanisi zalo ohlelweni lwezomthetho, waphinde waphendukela kuHodges ukuze aqhubeke nemfundo yakhe, kuphela kulokhu ezifundweni zomthetho.
"Ngakhuluma noDkt. [Char] Wendel, wangitshela ukuthi izifundo zomthetho zihluke kakhulu kunezobulungiswa, kodwa ngithole ukuthi ngiyabathanda, futhi bobabili bayahambisana," esho. .
Ukubhalisa ku- Master of Science in Legal Studies Uhlelo lweziqu ngo-2016, uFaul uyavuma ukuthi uhlelo lwezifundo nokwabiwa kwezimali kumenze wakwazi ukufaka isandla ebhizinisini lakhe ngendlela entsha ngokuphelele. Ukufunda ngama-torts, ukuhambisana kanye nokwaziswa ngamacala, uFaul usebenzisa ulwazi ukusiza ukushintsha indlela yena nethimba lakhe abangasiza kangcono ngayo abameli babo.
“Ukwazi ukuthi umthetho usebenza kanjani kukusiza kakhulu uma usuphume emgwaqweni. Uma ngazi ukuthi kuzokwenzekani enkantolo nokuthi kungani bedinga izinto ezithile, kuzolungisa icala lami libe ngcono kakhulu, ”kuchaza yena. "Manje, ngakolunye uhlangothi, ngiyazi ukuthi bekufanele ngabe benzeni, ngakho-ke ngingakwazi ukukuhambisa kubameli bami ukubasiza."
Njengoba sekusele amasonto ambalwa ngaphambi kokuba aphothule ngoDisemba 2017 ngeziqu zakhe zemasters, uFaul ubheke phambili ekuthatheni ulwazi lwakhe kanye nesipiliyoni sobuchwepheshe nokwandisa amathalente akhe emkhakheni wokufundisa.
“Sengidlule ezintweni eziningi ezahlukahlukene, futhi ngifuna ukubuyisa okunye kwalokho, futhi ukufundisa kuyindlela enhle yokukwenza. Ukukwazi ukuhlanganyela okunye kokuhlangenwe nakho kwami ​​nokuhlanganyela olunye ulwazi engilufundile nokuthi ngingalusebenzisa kanjani - kuzongizuzisa kakhulu. ”
Tags: Justice Criminal, IHodges University, HodgesU, Izifundo Zezomthetho, UMartha Faul, Umphathi Wezifundo Zomthetho, Hlala Eduzane
Joyina Idrayivu Yethu Yokunikela Ngezilwane Zami Nezabantu
IHodges U Ihola Indlela Ngeziqu Zekhompyutha
IHodges Connect Isiza Ukugcwalisa Izikhala Zamakhono Abasebenzi
IHodges U Ebizwa Ngokuhle Kakhulu KwamaVets 2020
IHodges University Imemezela iHodges Connect
FORT MYERS IKHAMPASI
I-4501 Colonial Blvd Fort Myers, eFlorida 33966
OKUSHA - iHodges Connect
Sekela amaHodges U Uma uthenga i-Amazon!
Chofoza kusixhumanisi esingezansi lapho uthenga ku-Amazon bese unikela ngengxenye yokuthengile kwakho esikhwameni samaHodges Hawks!
© I-Copyright Hodges University 2018-2021 | Inqubomgomo yobumfihlo | Imininingwane Yabathengi | IHodges University ivunyelwe esifundeni yi-Southern Association of Colleges and Schools Commission kumaKolishi ukuklomelisa ama-degree, ama-bachelor's, nama-master degrees. Ngemibuzo mayelana nokugunyazwa kweHodges University, xhumana neKhomishini yamaKholeji e-1866 Southern Lane, eDecatur, eGeorgia 30033-4097 noma ushayele ucingo (404) 679-4500. Yonke eminye imibuzo ephathelene nezinhlelo zemfundo zeHodges University, izidingo zokwamukelwa, usizo lwezezimali, njll., Kufanele iqondiswe eHodges University hhayi kwi-Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges. Ikharikhulamu yohlelo ngalunye lomtholampilo eHodges University ihlangabezana nezidingo zobungcweti ezilungiselelwe izwe laseFlorida. Lezi zinhlelo zokwelashwa zifaka iMaster of Science kuClinical Mental Health Counselling, iBachelor of Science in Nursing, Associate of Science in Physical Therapist Assistant, iSitifiketi ku-Emergency Medical Technician, iSitifiketi seParamedics, neSitifiketi ku-Practical Nursing. IHodges University ayikenzi isinqumo sokuthi ngabe lezi zinhlelo, ezibalwe ngenhla, ziyahlangabezana yini nezidingo zobuchwepheshe zamanye amazwe. Abafundi abahlela ukuthuthela ngaphandle kweFlorida kumele baqinisekise ukuthi ikharikhulamu ihlangabezana nezidingo zombuso.
Sisebenzisa amakhukhi namanye amathuluzi wokuqoqa idatha ukudala ulwazi olungcono kakhulu lomsebenzisi, ukuqonda kangcono ukuthi zisetshenziswa kanjani sicela uvakashele ikhasi lethu lenqubomgomo yobumfihlo. Ngokuqhubeka nokusebenzisa leli sayithi usinikeza imvume yakho yokwenza lokhu.Ngokuthi kuze kufike lapho i-General Data Protection Regulation (“GDPR”) isebenza kimi, ngokuvakashela le webhusayithi ngivuma ukucutshungulwa Kwemininingwane Yami njengoba kuchaziwe yi-GDPR ngezinhloso ezichazwe futhi zahlinzekelwa kuzinqubomgomo zikaHodges, njengoba zichitshiyelwa ngezikhathi ezithile. Ngiyaqonda ukuthi ezimweni ezithile, nginelungelo lokuphikisana nokusebenza kweDatha Yami Yomuntu. Ngiyaqonda futhi ukuthi nginelungelo lokucela (1) ukufinyelela kwiDatha yami Yomuntu; (2) ukulungiswa kwamaphutha noma amaphutha kanye / noma ukusulwa Kwemininingwane Yami; (3) amaHodges anciphisa ukucutshungulwa Kwemininingwane Yami; futhi (4) ukuthi uHodges ahlinzeke ngeDatha Yami uqobo lapho ecelwa ngendlela ephathekayo.